ချစ်ရတဲ့ သားသမီးတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးစရာ အချိန်လေးတွေကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ချစ်စရာလေးတွေ ပျော်နေကြတာ 🥰 - News MM
ချစ်ရတဲ့ သားသမီးတွေနဲ့အတူ ပျော်ရွှင် ကြည်နူးစရာ အချိန်လေးတွေကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ချစ်စရာလေးတွေ ပျော်နေကြတာ 🥰
ပရိသတ်တွေရဲ့ လေးစားချစ်ခင်မှုတွေကို များစွာရရှိထားတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ပရစိတ အလုပ်တွေကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို ကာလမှာ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စားသောက်ကုန်တွေ ပေးဝေလှူဒါန်းနေတဲ့အပြင် အလှူငွေတွေလည်း တတ်နိုင်သလောက်လှူဒါန်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီလို အလုပ်တွေ မအားလပ်တဲ့ ကြားကနေမှ ချစ်ရတဲ့ သားသမီးတွေ အတွက်လည်း မိခင်ရင်းသဖွယ် ကြင်နာစောင့်ရှောက်မှုတွေကို လုပ်ပေးတတ်ပါသေးတယ် ။
ကလေးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အချိန်ပေးကာ တူတူဆော့ကစားပေးတဲ့ အပြင် ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ ပြုစုပေးလို့ မိခင်မေတ္တာငတ်နေတဲ့ ကလေးငယ်လေးတွေ အဖို့တော့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ဂေဟာလေးက နွေးထွေးလုံခြုံနေခဲ့ပါတယ် ။
အခုလည်း ချစ်ရတဲ့ သားတွေ သမီးတွေကို အချိန် အပြည့်အဝပေးကာ အတူတူ ဆော့ကစားပေးရင်း ပျော်ရွှင်စရာ အချိန်လေးတွေကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ် ။ ကလေးတွေနဲ့ အတူ ဆော့ကစားနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေနဲ့ အတူ ” ဘာပဲ လှူလှူ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ မရှိ စိတ်ဖြတ်ပြီး လှူပါတယ်.
.ဘယ်အလုပ်ပဲ လုပ်လုပ် မျှော်လင့်စိတ် ဖြတ်ပြီး လုပ်ပါတယ်..ပီတိကိုသာ စားပြီး မေတ္တာပေးလို့ သံသရာမှာ အေးချမ်းစွာ ကျင်လည်ချင်ပါတယ်..အသက်ရှင်သမျှ ကိုယ့်နောက်ပါတာ လုပ်သွားရင်း ပေးနိုင်သလောက် ပေးဝေမျှချင်ပါတယ်..
စိတ်ရော လူရော အေးချမ်းချင်ပါတယ်..” ရေးသားထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။
ပရိသတျတှရေဲ့ လေးစားခစြျခငျမှုတှကေို မြားစှာရရှိထားတဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ပရစိတ အလုပျတှကေို ဆကျတိုကျပွုလုပျနသေူပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခုလို ကာလမှာ စားဝတျနရေေး ခကျခဲနကွေတဲ့ ပွညျသူတှအေတှကျ စားသောကျကုနျတှေ ပေးဝလှေူဒါနျးနတေဲ့အပွငျ အလှူငှတှေလေညျး တတျနိုငျသလောကျလှူဒါနျးနတော တှေ့ရပါတယျ။
ဒီလို အလုပျတှေ မအားလပျတဲ့ ကွားကနမှေ ခစြျရတဲ့ သားသမီးတှေ အတှကျလညျး မိခငျရငျးသဖှယျ ကွငျနာစောင့ျရှောကျမှုတှကေို လုပျပေးတတျပါသေးတယျ ။
ကလေးတှကေို အတတျနိုငျဆုံး အခြိနျပေးကာ တူတူဆော့ကစားပေးတဲ့ အပွငျ ကွငျကွငျနာနာနဲ့ ပွုစုပေးလို့ မိခငျမတေ်တာငတျနတေဲ့ ကလေးငယျလေးတှေ အဖို့တော့ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ ဂဟောလေးက နှေးထှေးလုံခွုံနခေဲ့ပါတယျ ။
အခုလညျး ခစြျရတဲ့ သားတှေ သမီးတှကေို အခြိနျ အပွည့ျအဝပေးကာ အတူတူ ဆော့ကစားပေးရငျး ပြောျရှှငျစရာ အခြိနျလေးတှကေို ဖနျတီးခဲ့ပါတယျ ။ ကလေးတှနေဲ့ အတူ ဆော့ကစားနတေဲ့ ပုံရိပျတှနေဲ့ အတူ ” ဘာပဲ လှူလှူ ပုဂ်ဂိုလျစှဲ မရှိ စိတျဖွတျပွီး လှူပါတယျ.
.ဘယျအလုပျပဲ လုပျလုပျ မြှောျလင့ျစိတျ ဖွတျပွီး လုပျပါတယျ..ပီတိကိုသာ စားပွီး မတေ်တာပေးလို့ သံသရာမှာ အေးခမြျးစှာ ကငြျလညျခငြျပါတယျ..အသကျရှငျသမြှ ကိုယ့ျနောကျပါတာ လုပျသှားရငျး ပေးနိုငျသလောကျ ပေးဝမြှေခငြျပါတယျ..
စိတျရော လူရော အေးခမြျးခငြျပါတယျ..” ရေးသားထားရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျဖောျပွပေးလိုကျပါတယျ ။
ရုပ်ရှင် သက်ကြီးပူဇော်ပွဲမှာ အကယ်ဒမီရဲအောင် ပြောခဲ့တဲ့ ထမင်းရှင် ပရိတ်သတ်ကြီးတို့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ဖွယ်ရာ စကားတစ်ခွန်း…….
ကျနော်တို့ ခံယူချက်နဲ့ အနုပညာတွေဟာ မဲနေမှန်းအခုမှ သိတယ်လို့ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကိုဘင်း
ရိုးသားစွာ ရှာဖွေလုပ်ကိုင်တဲ့အလုပ်တိုင်းဟာ တန်ဖိုးရှိကြောင်း သက်သေပြလိုက်တဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ
Previous Article မကြာခင်ကျရောက်တော့မယ့် သူ့မွေးနေ့လေးမှာ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကို ဖေးမရင်း ကုန်ဆုံးချင်တယ်လို့ ဆိုလာတဲ့ ဆီနွန်..
Next Article အောက်တိုဘာလ ၁၃ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် ကမ်ပိန်း အတွက် ပါဝင်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ် 🙏